पवन चामलिङको उँचाइमा पुग्न वैचारिक बाउन्ने प्रवृति भएका सी पी शर्माहरुलाई धेरै जुनीको आवश्यकता पर्छ : एस डी एफ - Sikkim Breaking News | Trending News
पवन चामलिङको उँचाइमा पुग्न वैचारिक बाउन्ने प्रवृत्ति भएका सी .पी. शर्माहरूलाई धेरै जुनीको आवश्यकता पर्छ एसकेएम पार्टीको आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तिसम्म जारी गर्न नसक्ने सी.पी. शर्माले आफूलाई वैचारिक बाउन्ने साबित गरेका छन्‌। एसकेएम पार्टीमा कुनै सिद्धान्त,कार्यक्रम, उद्देश्य र लक्ष्य नभएपछि व्यक्तिगत चरित्रमा हिलो छ्यापेर अराजक पार्टीलाई बैतरणी पार लगाउने नकाम कोशिश सी.पी. शर्माले सामाजिक सञ्जालमा पूर्व मुख्यमन्त्रीको विरोधमा उगेलेको नकारात्मक टिप्पणीबाट छर्लङ्‌ग भएको छ।
उनको त्यस नकारात्मक टिप्पणीलाई एसडीएफ पार्टी घोर निन्दा गर्दै भर्त्सना जनाउँदछ। सरकार स्थापना गरेको अढ़ाई वर्षको समय पुग्दा-नपुग्दै एसकेएम सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टि, गुनासो र विरोध बढ़ेर गएको छ। यसैले वैचारिक बाउन्ने प्रवृत्तिका सी.पी. शर्माहरू हतासिएर पू्र्व सरकार अनि मुख्यमन्त्रीलाई गालीगलौज गर्नुबाहेक अन्य जनमुखी रचनात्मक कार्य गर्न पूर्ण रूपले विफल बनेका छन्‌। यति मात्र नभएर दुर्बल नेतृत्वको सरकार र पार्टीलाई बचाउन सङ्‌कीर्ण मानसिकताको आडम्बरमा अस्तित्व धान्दै हुल्याहा भाषामा विद्वता प्रदर्शनको नाटक गर्नु उनको दिनचर्या बनेको छ। राज्यको राजस्व हजम गरेर खैरात थाप्ने आदतका भएका सी.पी. शर्माले आफ्नो ख्यामितलाई खुशी राख्न औपचारिक शिक्षाको डिग्रीसम्मको बदनाम गरेर गाउँको फटाहा हुल्याहा जस्तै भएर मनपरि लेख्न अग्रसर भएको बुझिन्छ। २५ वर्षको एसडीएफ कार्यकालमा केही नभएको देख्ने र पूर्व मुख्यमन्त्रीजस्ता अनुभवी तथा अब्बल नेतामाथि नकारात्मक टिप्पणी गर्ने एसकेएम प्रवक्ता एवं साहित्य प्रभारी सी.पी. शर्मालाई हामी भन्न चाहन्छौँ कि, राजनीति भनेको सकारात्मक र निर्माणात्मक प्रतिस्पर्धाको क्रान्ति हो। राजनीतिमा नीति, सिद्धान्त ,कार्यक्रम र योजनाको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। हिजो भएका गल्तीहरुलाई आज कार्य गरेर जवाफ फर्काउने जिम्मेवारीको नाम नै साँचो राजनीति हो।
एसकेएम पार्टीमा नीति, सिद्धान्त र योजना नभएको अराजक र अनुशासनहीन पार्टी बनेको एसकेएम पार्टीको साहित्य प्रभारीको नकारात्मक टिप्पणीले प्रमाण गर्दछ। व्यक्तिगत चरित्रमा हिलो छ्यापेर जनताको सहानुभूति बटुल्ने षड्यन्त्रमा लागेको छ। कथित परिवर्तनको नाममा सत्तामा चढ़ेको एसकेएम सरकारले अझ़ाई वर्ष पुग्न लाग्दा एउटै पनि नयाँ योजना, कार्यक्रम र दिशा दिन नसक्नु भनेको उनीहरुको सैद्धान्तिक र वैचारिक अपाङ्गता हो।
अराजक मानसिकताको प्रमाण हो। एसडीफ सरकारले नै बनाएका सिस्टम (व्यवस्था) र संस्थागत कामहरुलाई लिपपोत गर्नु, नाम बदल्नु, दाम बढ़ाएर रि-टेण्डर गर्नु आदिजस्ता कामहरूमा एसकेएम सरकार भुलिरहेको सबैले देखिरहेका छन्‌, बुझिरहेका छन्‌। पूर्व मुख्यमन्त्री श्री पवन चामलिङको दुरदर्शी विचार, उदारता र मानवतावादी नेतृत्वको प्रतिफलले २५ वर्षमा सिक्किम र सिक्किमेली जनताको मान, मर्यादा र अस्तित्वलाई उच्च राख्ने ऐतिहासिक काम भइसकेको छ। जनादेशले दिएको २५ वर्षलाई श्री चामलिङ अनि एसडीएफ पार्टीले सिक्किमको विकास र समृद्धिका निम्ति सदुपयोग गरिसकेको छ।
यो अकाट्य सत्यतालाई बुझ्न सी.पी. शर्माहरूमा उच्च विचार र अन्तस चेतना जाग्रत हुन आवश्यक छ। जनादेशले दिएको अमूल्य यो समयलाई पूर्व मुख्यमन्त्री र पूर्व सरकारलाई गाली गर्न खेर फ्याँक्नुको सट्टा जनताको हितको निम्ति नयाँ-नयाँ कार्ययोजना तयार गरेर काम गर्ने सुझाउ एसकेएम पार्टी अनि सी.पी. शर्माहरूलाई हामी दिँदछौँ। हिज राज्य ओबीसीलाई लाटाको धोती भनेर खुब प्रचार गराउने सी.पी. शर्माले यो लाटाको धोती त्यस समुदायलाई कहिलेसम्म लगाइरहन दिने? के यो मुद्दामा सी.पी. शर्माले एकैपल्ट पनि आवाज उठाएका छन्‌? छुटेका १२ जातिको ट्राइबलको मुद्दा, लिम्बू-तामाङको सीटको आरक्षण र एसकेएमको फर्मूला, संविधानिक विशेष धारा ३७१ एफ, एक देश एक राशन कार्ड, कलेजबाट निष्कासित हाम्रा ४ जना विद्यार्थी नानीहरुको भविष्य जस्ता अहम् र गहन कुरामा आजसम्म सी.पी. शर्मा किन चुप छन्‌? किनभने सी.पी. शर्माजस्ता बाउन्ने वैचारिक मान्छेलाई सिक्किम र सिक्किमेली जनताभन्दा प्यारो सत्ता र कुर्सी हो। उनीहरू आफ्नो कुर्सी बचाउनका लागि सिक्किमे जनताको अधिकार र सिक्किमलाई नै दाउमा लगाउन रत्तिभर पनि हिचकिचाउँदैन। हामीले अहिलेसम्मको एसकेएम पार्टी र सरकारका काम-कार्वाहीबाट यही प्रमाण भएको पाएका छौँ।
पवन चामलिङ भनेका विश्वस्तरमा ख्याति कमाएका सम्पूर्ण भारतीय नेपाली तथा गोर्खा समुदायका श्रष्टा हुन्‌। उनको उँचाइमा पुग्न सी.पी. शर्मालाइ धेरै जुनीको आवश्यकता पर्छ। सिंहलाई खिच्चा कुकुरले भुकेर तर्साउन खोज्नु भनेको गाउँको शान्त वातावरणलाई भङ्ग गर्न हल्ला गरेको मात्र सावित हुनेछ। पहरामा टाउको ठोक्काएर रगताम्य हुने मूर्खहरुलाई राम राम भन्नसकिन्छ अरु केही गर्नसकिन्न। यही मुख्य कुरा बुझेर सीपी शर्माले आफ्नो मति सपारून्‌ भनेर अर्ति पनि दिँदछौँ।